Isikhombi se-Psychological for MT4 - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Izinkomba ze-Forex MT4 Isikhombi se-Psychological for MT4
Isikhombi se-Psychological for MT4
Okthoba 21, 2021
Isingeniso se-Psychological Indicator
1 Isingeniso se-Psychological Indicator
2 Yini i-Psychological Indicator?
3 Isebenza Kanjani Inkomba Yezengqondo?
4 Ungayisebenzisa kanjani i-Psychological Indicator?
Isikhombi se-Psychological luhlobo lwesikhombi olukhombisa umfutho nenkomba yokuthambekela, kanye namanani entengo ethengwe ngokweqile nangaphezulu futhi ukuhlehliswa kwayo okuhambelana nalokho okungenzeka kube khona.
Isebenzisa indlela eyingqayizivele lapho iqhathanisa khona inani lezimo intengo eye inyukele phezulu noma phansi futhi ibalwa ngefomu lephesenti.
Yini i-Psychological Indicator?
Le nkomba ifaka umugqa oluhlaza okwesibhakabhaka oscillates ngaphakathi kobubanzi bukaziro kuye 100 nabamaki e 25, 50, futhi 75. Lawa maki asetshenziselwa ukukhomba amazinga we-overold kanye ne-overbought, kanye nokuqondiswa komkhuba.
Umugqa walezi zindawo zokukhomba ubuye u-jagged kakhulu futhi uhamba ngendlela efana nezitebhisi zezitebhisi.
Isebenza Kanjani Inkomba Yezengqondo?
I-Psychological Indicator isebenzisa ifomula ehlanganisa isilinganiso esiphakathi kwenani lokunyuka kwamanani ngaphezulu kokugcina n izikhathi kanye ne- n izinkathi. Le nombolo bese iphindaphindwa ngo 100 ukuyijwayela ibanga likaziro kuye 100.
Umugqa Wengqondo = (Ukuhambela phezulu ekugcineni n izinkathi / n izinkathi) x 100
Ungayisebenzisa kanjani i-Psychological Indicator?
Isikhombi se-Psychological sinokuhluka okukodwa okuguqula ukuzwela kwenkomba.
Ukuguquguquka kwe- "PsychPeriod" kubhekise kunombolo ye- n izikhathi ezisetshenziswe ngaphakathi kwefomula yesikhombi se-Psychological.
Kusetshenziswa umaka ophakathi we-Psychological Indicator, okuyi 50, le nkomba ingasetshenziswa ukukhomba mkhuba isiqondiso. Ulayini we-Psychological Indicator ujwayele ukuhlelwa ngaphezulu 50 noma nini lapho imakethe isezingeni eliphansi nangaphansi 50 noma nini lapho imakethe isendaweni ephansi. Noma kunjalo, ibuye iwele phakathi 50 Izinga noma nini lapho imakethe ingahambi.
Ingasetshenziselwa ukukhomba amazinga athengwe ngokweqile nangaphezulu futhi ukubuyiselwa emuva okuhambisanayo kusho ukusetshenziswa kwe- 25 futhi 75 amazinga omaka. Ulayini wezengqondo ngaphezulu 75 ikhombisa imakethe ethengwe ngokweqile, ngenkathi umugqa uwela ngezansi 25 ikhombisa imakethe ethe xaxa. Zombili lezi zimo zemakethe ziyizimo eziphambili zokuhlehliswa okusho ukuthi kungenzeka.
Linda ulayini we-Psychological Indicator ukuthi wehle ngezansi 25. Vula i-oda lokuthenga lapho kuhlangana khona iphethini yokubuyela emuva ye-bullish nolayini owela emuva ngenhla 25. Setha ukulahleka kokuma ekusekelweni ngezansi kwekhandlela lokungena.
Linda ulayini we-Psychological Indicator ukuthi wephule ngenhla 75. Vula i-oda lokuthengisa lapho kuhlangana khona iphethini yokubuyela emuva ye-bearish nolayini owela emuva ngezansi 75. Setha ukulahleka kokuma ekumelaneni ngenhla kwekhandlela lokungena.
Le nkomba ingaba yinkomba enhle kakhulu yokuhlonza ukuqondiswa kwethrendi ngokuya ngokuthi ulayini we-oscillator ngokuvamile ungaphezulu yini 50 noma ngaphansi kwaso. Noma kunjalo, ingahle inganembi ngaso sonke isikhathi njengesiginali yokubuyisa umkhuba njengoba lo mugqa unganqampula 50 ezimakethe ezingezona ezihamba phambili.
Lapho le nkomba ikhanya khona njengamaphethini wokuguqula inkomba yokuguqula inkomba yokuguqula noma kunini lapho umugqa weqa ukwedlula ibanga le- 25 uku 75.
Isikhombi se-Psychological for MT4 yiMetatrader 4 (MT4) inkomba kanye nengqikithi yale nkomba yezobuchwepheshe ukuguqula idatha yomlando onqwabelene.
Isikhombi se-Psychological for MT4 sinikeza ithuba lokuthola izici ezihlukile namaphethini kumanani entengo angabonakali ngeso lenyama..
Ungayifaka kanjani i-Psychological Indicator ye-MT4.mq4?
Landa i-Psychological Indicator ye-MT4.mq4
Kopisha inkomba yezengqondo ye-MT4.mq4 ku-Directory yakho ye-Metatrader / ochwepheshe / izinkomba /
Qhafaza kwesokudla ku-Psychological Indicator ye-MT4.mq4
Inkomba Isikhombi Sezengqondo se-MT4.mq4 siyatholakala kwiShadi lakho
Ungayisusa kanjani i-Psychological Indicator ye-MT4.mq4 kwi-Metatrader Chart yakho?
Isikhombi se-Psychological for MT4 (U-downloader mahhala)
Isiqephu esedluleMACD kwehlukana Forex Ukuhweba Isu
Isihloko esilandelayoInkomba ye-Intraday Intensity Open Form MT5
Ungawasebenzisa Kanjani Amathuluzi Okuhweba Okukhululekile Kwe Forex – Ekugcineni ...